‘आशिकी-२’ बाट चोरिएकै हो त ‘म यस्तो गीत गाउँछु-२ ?’- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
‘आशिकी-२’ बाट चोरिएकै हो त ‘म यस्तो गीत गाउँछु-२ ?’
काठमाडौँ — फिल्म 'म यस्तो गीत गाउँछु २'को टिम यतिखेर विवादमा तानिएको छ । बिहीबार निर्माण युनिटले सार्वजनिक गरेको ट्रेलर बलिउड फिल्म 'आशिकी-२'बाट चोरिएको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् ।
युट्युबमा कतिले त 'आशिकी-२'को नेपाली भर्सन भन्दै कमेन्टसमेत गरेका छन्। 'ट्रेलर त आशिकी-२ र अ स्टार इज बनको संयोजन जस्तो लाग्यो' एक दर्शकले ट्रेलरको कमेन्टमा लेखेका छन्।
३ हजार बढी कमेन्टमा अधिकांशले फिल्मको ट्रेलर नै चोरिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्। निर्देशक सुदर्शन भने यी दुई फिल्मसँग आफ्नो फिल्मको ५ प्रतिशत पनि नमिल्ने बताउँछन्।
'केही समूह पछाडि लागेका छन्। फिल्म नै नहेरीकन जे पायो त्यही बोल्नु भनेको त समूह लाग्नु नै हो। यसले मलाई केही फरक पार्दैन। मेरो फिल्मती फिल्मसँग ५ प्रतिशत पनि मिल्दैन,' उनले फोन संवादमा भने,'म्युजिकल फिल्म भन्ने बित्तिकै आशिकी–२ हुन्छ ?'
तर सुदर्शनलाई चोरीको आरोप लाग्नु नयाँ होइन। उनको डेब्यू फिल्म 'मेरो एउटा साथी छ' कोरियन फिल्म 'मिलिनियर्स फस्ट लभ'को हुबहु कपी थियो भने पछिल्लो फिल्म 'रामकहानी' थाई फिल्म 'पीमक'सँग मिलेको थियो।
प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १८:२८
कार्यक्रम छ। त्यसैमा व्यस्त हुन्छु।
'भ्यालेन्टाइन्स डे' माया गर्नेहरुले आफ्ना मायाले मिस गर्ने दिन हो जस्तो लाग्छ। अँ, मलाई याद छ म टिनएज हुँदा विद्यालयमा कार्ड र फूल आदान प्रदान हुन्थ्यो। मलाई मनपराउनेहरुले गुलाब नै दिन्थे। त्योबेलाको साथीसँग यो दिन मनाएको धेरै याद आउँछ।
'ओ माइ गड' (हाँस्दै) । धेरैजनाको प्रस्ताव आउँथ्यो। नक्कली गुलाब, कार्ड अनि उपहार दिने साथिहरु त धेरै थिए नि। प्रेम प्रस्तावका लागि भ्यालेन्टाइन्स डे नै कुर्नुपर्दैन जस्तो लाग्छ। अहिले पनि फ्यानहरुले फूलहरु पठाउनुहुन्छ। म चाहीँ कसैसँग प्रेममा छैन। तर म सबैलाई प्रेम गर्छु।
कुनै पनि पर्व नभएको भन्दा राम्रो। एउटा विशेष दिनमा आफूले मन पराएको मानिससँग समय बिताउनु एकदम राम्रो लाग्छ। यो पर्वलाई लिएर म एकदमै सकरात्मक छु।
कुनै विशेष याद छ यो दिनसँग?
यादहरु त धेरै छन् तर सेयर गर्न मिल्दैन (खित्का छोडेर) । त्यही हो त्योबेला हाम्रो साथीहरुको समूह हुन्थ्यो। खुब रमाइलो हुन्थ्यो। त्यो क्षण याद आउँछ।
हामीले भ्यालेन्टाइन्स डे कहिल्यै पनि मनाइनौं। उहाँसँग मेरो अभिभावक, शुभेच्छुक अनि मित्रको सम्बन्ध थियो। बिहे भयो। त्यस्तो केही थिएन।
मेरो शुभचिन्तकले त सँधै मलाई पनि माया गर्ने व्यक्ति आइदिओस्। मुभ अन होस् भन्ने इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ।
म यही भन्न सक्दिन भविष्यमा के हुन्छ। म आजसम्म रमाएर बाँचिरहेको छु। मैले रमाउने कुरामा केही पनि छोडेको छैनजस्तो लाग्छ। आफ्नो जिन्दगी रमाइलोसँग नै जिइरहेको छु। र, सुभचिन्तकको इच्छालाई मैले सकरात्मक रुपमा लिएको छु। यो उहाँहरुको मप्रति चिन्ता हो। हाम्रो योजना हाम्रो हातमा हुँदैन।
म जहिल्यै मिस गर्छु। कुनै पर्व आउनु पर्दैन उहाँलाई सम्झन। मैले बिर्सेकै छैन त नसम्झने कुरा हुँदैन। म हरेक बिहान उहाँलाई धुप बालेर ढोग्ने गर्छु। यो मैले गर्ने सम्झना हो। भगवानको रुपमा लिन्छु उहाँलाई। उहाँको तस्बिर भगवानसँगै राखेको छु। उहाँलाई सम्झन भ्यालेन्टाइन्स डे आउनु पर्दैन।
पालो नयाँ मिस नेपालको